Tsika - Howling Pixel
Tsika (culture, habit, manner, custom) kana ichitaurwa pamusoro peboka revanhu izwi rinoreva kuhwerengedzwa kwezvinhu zvinosanganisira: mafungiro avo, zvavanotenda kwazviri, zvavanokoshesa nokuyeresa, uye ruzivo rwavainarwo. Tsika dzinosiyana pakati pemapoka evanhu akasiyana uye dzinosiyanawo nokufamba kwenguva muboka rimwechete revanhu.
Tsika dzeVaShona dzinoti mwanasikana haagari nemurume asina kubvisirwa roora.
Habit tsika, mugarire, munyire, musangu kana munyire.
BaKalanga vanoti lenje (custom; tradition). Zvichida ndipo panobva zita rokuti Chirenje?
VaKongo vanoti fu kana nza (n. custom, manner, habit, style, practice, rule, nature, disposition, conduct, behaviour, usage, fashion, way).
VaYao vanoti msangu (a habit, a characteristic).
VaDigo vanoti miko (custom, taboo) kureva mutemo yzvirango?.
VaTonga vanoti chimbo (custom) kureva tsika.
VaTonga vanoti ciyanza (custom, scenario) kureva tsika kana mutowo.
Bununu zvinoreva munhu asina kupfeka mbatya. Mutsika dzenyika dzemuAfrica kusasimira chinhu chinozvidzwa uye chisingatenderwe pamitemo yenyika. Tsika zhinji dzemuAfrica dzinoti munhu akafamba asina kusimira ava kupenga kana kuti ane mamhepo. Chinhu chinoonekwa chichiratidza munyama kana kuti kutukwa pamunhu iyeye.
Kune dzimwe nyika dzekuMadokero, kuEurope, neNorth America mitemo yenyika inotendedza kuti kuve nenzvimbo dzinosangana vanhu vasian kusimira. Hazvizivikanwe kuti chinangwa chaicho chokunge vanhu vachisangana vasina kusimira ndechei.
Cameroon inyika iri muAfrica iri kumadokero kweDunhu rePakati peAfrica.
Nyika dzakakomberedza Camerron dzinoti: Nigeria kumadokero; Chad kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva; Central African Republic kumabvazuva; nekuchamhembe kune Equatorial Guinea, Gabon, neRepublic of the Congo. Cameroon ine zita remadunhurirwa rokuti Africa doko nokuda kwehuwandu hwevanhu vakasiyana tsika nemagariro uye uwandu hwezvishongo zveketanyika. Nyika iyi yakashongedzwa nezvinoti: makomo, masango anonaya mvura; makura uye magwenga. Nzvimbo iri pakanyanya kukwirira ndiro Gomo reCameroon riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero. Maguta makurusa ndiwo anoti Douala, Yaoundé neGaroua. Cameroon ine mapoka endimi dzinotaurwa anodarika 200.
Nyika iyi inozivikanwa nokuda kwemhando yayo yemimhanzi kunyanya makossa nebikutsi uye chikwata chenhabvu chine mukurumbira wekugona nhabvu. French neEnglish ndiyo mitauro yekumahofisi.
Chikoro (school) inzvimbo inoenda vanhu kunodzidziswa maererano nezvinhu zvatinoshandisa muhupenyu. Zvidzidzo zvinosanganisira mitauro, nhoroondo yenyika, hupfumi nekuchengetedzwa kwahwo, kutenga nekutengeserana nezvimwewo.
Dzinza (Line of descent, Tribe, Clan, Stock, Nation) iboka revanhu vane tateguru wechirume mumwe kana madzitatetguru ane ukama nemutupo umwe.
Vatauri vechiManyika vanodana zita redzinza kuti matumbwa. Dzinza rinomutswa nemwana mukomana wemhuri ndiye ega anogona kuzvara mwana ane mutupo wakafanana newake. KuchiShona mwanasikana kazhinji anoroorwa nemunhu ane mutupo wakasiyana; achinge aroorwa vana vaanozvara vanonzi ndevedzinza remurume akamuroora, baba vevana.
Mune dzimwe nhambo izwi rokuti dzinza rinoreva zvimwe nechinonzi rudzi or nation kuEnglish. Bhaibheri reChiNdau rinoshandisa izwi rokuti dzinza kuturikira nation.
Hari imhando yepoto yakaumbwa nedhaka.
Husiku (Night in English) inguva yokunge zuva ranyura kunze kwava nerima. Kana kusina makore nyenyedzi dzinoonekwa nguva iyoyi uye mwedzi unokwanisa kuonekwa zvakare.
Kutanga kana kuvamba (to start) zvinoreva kuita chinhu patsva.
Mbudzi (goat in English) imhuka inopfuyiwa pamusha. Mbudzi dzinowanikwa Pasirose dziine mhando dzakasiyana-siyana. Mbudzi dzinochengeterwa nyama uye mukaka wadzo. Kunonzi mbudzi dzinopa chikamu chemukaka chinokwana 2% wemukaka unodyiwa nevanhu Pasirose.
Mbudzi nzvari inotakura nhumbu kwemazuva 150.
Muchidzidzo Chezvipenyu, moyo, mwoyo kana mhumba (heart in English) inhengo yemuviri inosaira ropa kuti risvike kune dzimwe nhengo dzose dzemuviri.
Kupfura kweMoyo (Heart Beat).
Munhurume, murume, mwamuna kana mamuna (man; male person) zvinoreva mukono wemunhu akura; kana ari mudiki anonzi mukomana. Asi shoko rokuti murume rinoshandiswazve kutaura chero mukono wemunhu zvisinei kuti ane makore mangani ekuzvarwa.
Vamuna (men, husbands).
Muranda, chitesi, tyoko kana bandadzi (English: Slave) munhu anoonekwa nekubatwa senhumbi kana chimwe chinhu chinotengwa; uye munhu anomanikidzwa kushanda pasina muripo waanopiwa. Munhu ari muhuranda:
anomanikidzwa kugara panzvimbo paasiri kuda; anomanikidzwa kubata mabasa asingade; anoshanda asina muripo; anomanikidzwa kuroora kana kuroorwa; anokwanisa kumanikidzwa kushanda mumawuto achiri mudiki.
Gwaro rino riri kuunganidza mashoko anotaura pamusoro pehunhu hwevanhu.
Chinyorwa chino chinounganidza mashoko anodudza kukura kwechinhu, nzvimbo kana munhu.
Chinyorwa chino chiri kuunganidza mashoko anoreva kutaura nenzira dzakasiyana. Kutaura, kureketa, kuhwereketa.
Nguva kana nhambo (Time)- iri izwi rinoreva kupimwa kunoitwa kutaramukana kwakaita zviitiko. Nguva inopimwa nezviyero zvinonzi: sekondi(s), mineti (min), awa (h). Musi umwe une maAwa makumi maviri nemana (24h). Awa rimwe rine makumi matanhatu emineti. Mineti imwe ine makumi matanhatu esekondi.
Kudzamara, dzamara, kudzimara, kudzingara - ishoko rinotaurwa kurevera chinhu chiri kuitwa iko zvino chichizomira kana kushanduka kana imwe nguva yasvika. Somuenzaniso - ticharima dhunduru rekumadokero kudzamara zuva ravira. Ticharamba tichifamba kudzamara tasvika pane misha.
Metsa (until) izwi reChiNdau rinofanana nokuti kudzimara.
Ruth 1:19, Ndizvo vairi ava vakaenda metsa vaguma Bhetherehema: So the two of them went on until they came to Bethlehem. (kubva muBhaibheri reChiNdau )Mhindi (Short space of time).
Kamukowoko, kamukuwo kana chinguva (Instant. Moment. 2. Short space of time).
Kutunha, kutunhidzira kana kutunhiridza (postpone) apa kureva kushandudza chiitiko chakatarwa nguva yacho kuti chichifamba panguva iri mberi.Chigu (temporary thing).
Chingo, chinguri kana chiko (Since). Chingo ndakabarwa handisati ndambosvika kuMavhuradonha.
Nhasi (today) izwi rinoreva zuva rino ratiri kana musi uno watiri. KuChiNdau vanoti nyamashi.
Ruwoko (arm in English) ndiyo nhengo inobuda kubva pamutumbi wemunhu yatinotakura nayo zvinhu.
Nyara (hands) apa kureva mawoko kururimi rweChiNdau. Paumwe nepakuwanda tinoti nyara.
Ruchechete (collar bone).
Kumbandidza (Grip firmly) Akati musika webadza mbandi nembato: he gripped the spike-head of the hoe with the tongs.
Rwiyo kana chimbo kureva mazwi anoimbwa nevaimbi kazhinji zvichifambirana nezviridzwa zvakadai engoma, mbira, magitare, chipendani, hosho, zvichingodaro. Vanoimba kazhinji vanodzana zvakare, kudzana kwavo kuchienderana nemazwi anoimbwa. Kune mimhanzi inobva kunyika dzakasiyana ine maimbirwo nekudzana kwakatsaukana.
Kuimba (to sing).
Vana kana wana (children in English) izwi rinoreva vanu vakazvarwa naBaba naMai. Rinoshandiswazve kureva vanhu vachiri vadiki vari pasi pezera remakore gumi nemanomwe (18). Takatarisana nevanhu vana vanotarisirwa kuti vange vachiri pasi pehutongi hwevabereki vavo, vachichengetwa nekutungamirwa nevabereki vavo. Zera rokunge vanhu vachinzi vana rinosiyana nokusiyana kunoita: tsika, nyika, rudzi, chitendero, zvichingodaro.
Kuchitendero chechiJudah munhu anoyaruka kunzi akura ava murume kana kuti mukadzi pamakore gumi nematatu (13) ekuberekwa; panguva iyi panoitwa mabiko anonzi barmitzvah kana kuti batmitzvah.
Rudzi rweVarungu rwakapambira Pasirose munguva yokupamba kwavakaita Africa, North America, South America, Australia neNew Zealand.
Mutauro wekuEngland unonzi English, asi isu toti Chingezi. Shoko rokuti chingezi rinotaurawo pamusoro petsika dzeMangezi, nokumwe kutaura tori Chirungu kana Chirumbi.